Xildhibaan Sagal Cabdirisaaq Biixi » Know Your MPs (Test Page) – Kalfadhi
Xildhibaan Sagal Cabdirisaaq Biixi » Know Your MPs (Test Page)
Xildhibaan Golaha Shacabka Waxay ku dhalatay Muqdisho – Diseembar 1982-kii Deegaan-doorasho: Jubbaland Waxaa lagu doortay Kismaayo, Nofeembar 2016 Waa ololeeye xuquuqul-insaanka iyo arrimaha haweenka ah home
Sagal Cabdirisaaq Isaaq Biixi oo ka mid ah xildhibaannada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka 10-aad ee Soomaaliya, waxay ku dhalatay magaalada Muqdisho bishii Diseembar ee sanadkii 1982. Deegaan-doorashadeeda waa Jubbaland. Magaalada Kismaayo ayaa lagu doortay bishii Nofeembar, 2016.
Waxbarashadeeda aasaasiga ah ilaa heer jaamacad waxay ku qaadatay gudaha Soomaaliya. Degmada Beled-Xaawo ee gobolka Gedo ayay ka soo dhigatay dugsiga hoose. Sanadkii 2003 ayay ka baxday dugsiga dhexe iyo sare ee Axmed Gurey ee Muqdisho.
Jaamacadda Muqdisho ayay ka qalinjebisay sanadkii 2007. Waxay ku takhasustay culuumta maamulka iyo maareynta. Heerka labaad ee jaamacadda waxay ku soo qaadatay dalka Bakistaan, iyadoo kulliyadda maamulka mashaariicda uga baxday jaamacadda Iqra sanadkii 2010.
Waa guddoomiyihii hore ee guddiga xuquuqul-insaanka iyo haweenka ee baarlamaanka 10-aad ee Soomaaliya, xilkaas oo loo doortay bishii Abriil ee sanadkii 2017.
Intii u dhaxeysay sanadihii 2013 ilaa 2014 waxay agaasime ku-xigeen ka soo noqotay idaacadda Bar-kulan oo ahayd mashruuc ku dhisnaa maalgelin ay siiyaan deeq-bixiyeyaal caalami ah.
Intii u dhaxeysay 2011 ilaa 2012 waxay la-taliye ka soo noqotay wasaaradda gaashaandhigga.
Muddadii u dhaxeysay 2014 – 2015 waxay la soo shaqeysay wasaaradda dastuurka, iyadoo madax u ahayd qeybta horumarinta dastuurka.
Sidoo kale sanadkii 2015 waxay la-taliye dhinaca xuquuqul-insaanka ah, gaar ahaan jandarka ka noqotay wasaaradda xuquuqul-insaanka iyo arrimaha haweenka.
Sagal iyo siyaasadda
Sagal ayaa Kalfadhi u sheegtay in ay wax badan ku taamaysay in ay mar qabato xaafiis la isku doorto iyadoo u arkaysay meelaha ay isbeddel weyn ka samayn karto. Taas ayaa ah sababta ku dhiirrigelisay inay xildhibaannimo raadiso.
Waxay xiiseysaa akhrinta taariikhda iyo u dhaqdhaqaaqidda xuquuqul-insaanka, gaar ahaan waxbarashada gabdhaha.
Waxay sheegtay inay si hoose ula socoto baahiyaha ka jira deegaanka laga soo doortay. Waxay u dhaqdhaqaaqdaa sidii ay dadka deegaankaas u heli lahaayeen waxyaabaha ay xaqa u leeyihiin iyo sidoo kale in lagu dhiirrigeliyo ka faa’ideysiga fursaha ay haystaan.
Categories: political Party B